घरको कुन दिशामा दियो बाल्नुहुन्छ ? यस्तो दिशामा बाल्नुहोस मिल्नेछ सुख सम्पत्ती !! | सुदुरपश्चिम खबर
घरमा दियो बाल्दा यो दिशामा बाल्नुहोस आयु बढ्छ हिंदू शास्त्रमा दियो बाल्नु निकै शुभ मानिन्छ । यसैले धेरै मानिसहरु आफ्नो घरमा दियो बाल्ने गर्छन् । यसको उज्यालोले दुस्ख कस्ट भाग्ने विश्वाश रहेको छ। बेदमा अग्नीलाई भगवान नै मानिएको छ । यसैले हिन्दू धर्ममा कुनै शुभ कार्य गर्नुपुर्ब भगवानको अघी दियो बाल्ने गरिन्छ । दियो बाल्ने धार्मिक र बैज्ञानीक दुबै कारण रहेको पाईन्छ ।
धार्मिक कारण दियो र उज्यालो ज्ञानको प्रतिक हो । पूजामा दियो बाल्नुको बिशेष महत्व रहेको छ । दियो बाल्नुको अर्थ हाम्रो जीवनको अज्ञान अन्धकार हटाइ जीवनमा ज्ञान ज्योति ल्याउनु हो । हाम्रो धर्म अनुसार पूजा गर्नु पहिला दियो बाल्नु अनिवार्य रहेको छ । आरती गरेर घ्युको दियो बाल्नाले सुख सम्पत्ति आउने विश्वाश गरिन्छ । यसो गर्दा घरमा स्थाइ रुपमा ९सधैंको लागि० माता लक्ष्मीको बास हुने धार्मिक विश्वाश रहेको छ ।
बैज्ञानीक कारण गाई को घ्युमा रोगाणुलाई भगाउन सक्ने क्षमता हुन्छ । यो घ्युको दियो बाल्नाले घ्यु आगोको संपर्कमा आएर बातावरण नै सुद्दरपवित्र बनाउछ । दियो बाल्नु शुभ रहेको छ चाहे त्यो पूजामा होस या अन्यत्र । दियो बाल्दा सधैं जप्नुहोस यो मन्त्र
दीपज्योति ः परब्रह्मस् दीपज्योतिस् जनार्दनस्। दीपोहरतिमे पापं संध्यादीपं नामोस्तुते।। शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखं सम्पदां। शत्रुवृद्धि विनाशं च दीपज्योतिस् नमोस्तुति।। दियो बाल्दा यस्ता कुरा ख्याल गर्नुपर्छ
दियो पूर्व दिशा तर्फ फर्काएर राख्नाले आयु बड्छ । दियो पश्चिम फर्काएर राख्नले दुस्ख बड्छ । दियो बालेर दक्षिण फर्काएर राख्नले जन धन हानी हुन सक्छ । दियोको प्रकाश आउने भागरमुख भाग सधैं पूर्व फर्काएर दियो बाल्नु । (नयाँ पुस्ता बाट सभार)